MADAXWEYNE RIYAALE IYO WASIIRKA INGIIRISKA U QAABILSAN AFRICA OO KULAN YEESHAY
Mr. Chris Mullen, Wasiirka Xidhiidhka Afrika ee Dawladda Ingiriiska iyo Madaxweynaha Somaliland Mud. Daahir Rayaale Kaahin ayaa shalay mar kale kulmay, Kulankaa shalay oo Madaxweyne Rayaale Madaxtooyada kula kulmay Wasiirka Dawladda Britain u qaabilsan Arrimaha Afrika iyo Wefti uu hoggaaminayay waxa uu ahaa kulan sagootis ah, ka hor intii aanay waftiga Ingiriisku ka ambabixin dalka Somaliland.
Madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin iyo Chris Mullin wasiirka britain u qaabilsan Africa oo dhex Mushaaxaya Madaxtooyada Somaliland
War-saxafadeed Afhayeenka Madaxtooyadu Cabdi Idiris Ducaale ka soo saray kulankaas waxa uu ku sheegay in Madaxweynaha Rayaale uu u dhiibay Wasiirka, Mr. Chris Mullen fariin dhowr qodob ka kooban oo uu ka codsaday in uu ka gaadhsiiyo Xukuumadda Ingiriiska. Warsaxaafadeedkaas oo dhamaystirana waxa uu u dhignaa sidan:-
Madaxweyne Riyaale iyo Chris Mullen wasiirka britain u qaabilsan Africa oo si fool ka fool ah ugu kulmay Madaxtooyada Somaliland intii aanay wefdigu ka ambabaxin Hargeysa
Madaxweynaha JSL Mudane Daahir Rayaale Kaahin ayaa Maanta (shalay) mar labad qaabilay Wasiirka Xukuumada Boqortooyada Biridaaniya u qaabilsan arrimaha Africa Mudane Chris Mullin. Wuxuuna ugu horeyntii Madaxweynuhu waydiiyay Wasiirka dareenka wixii uu la soo kulmay intii uu joogay dalka waxana ugu jawaabay fariintii aan idinka qaadi lahaa waan hayaa.
Ka Bilaw Bidix Gudoomiyaha Golaha Baarlamaanka Somaliland Mudane Qaybe, Gudoomiyaha Golaha Guurtida Somaliland Mudane Saleebaan Maxamoud Aadan, Wasiirka Warfaafinta Somaliland Mudane C/laahi Maxamed Ducaale oo ka qayb qaadanaya Kulanka Madaxtooyada.
Mudane Rayaale oo ay u muuqatay in Wasiirku uu soo taabtay arimahii hore ay uga wada hadleen inuu yahay doonista iyo dareenka shacbiga siyaasiyiinta iyo wax garadka Somaliland waxa uu ku sii adkeeyay inuu xukuumadiisa ka gaadhsiiyo:
Wasiirka Britain u qaabilsan Africa Chris Mullin Midig iyo Safiirka ingiriiska u fadhiya Addis Ababa oo dhegaysanaya Warbixinta Madaxweynaha Kulankooda Madaxtooyada.
1. Arinta Ictiraafka Somaliland
2. In aynaan waxba ka qabin wixii uu qabsoomay Somalia laakiin macaamilkayagu uu noqon doono in aanu layeelano xidhiidh iyo derisnimo wanaagsan sida wadamada kale ee aanu jiiraanka nahay.
3. Wixii deeq Caalamku bixinayo inaanu qaybtayada toos u helno.
4. In Somaliland nabada ay tixgalinaysa oo anay wax dagaal ah rabin hadii aan lagu kalifin.
5. In C/laahi maleeshiyadiisa kala baxo xuduudaha Somaliland gudaheda ah.
6. In la naga qayb geliyo shirarka deeqaha iyo kaalmada ku wajahan Somali.
7. Inay gacan inaga siiyaan arinta sugida iyo dhidib u adkaynta nabadgelyo iyo xasiloonida.
8. Arrimaha loo baahan yahay caalamka in anau ku sirmin iyo arimihii iskashiga labada dhinaca ee ay isla gorfeeyeen wasiirada saaka.
Diblomaasiyiinta Reer Somaliland u fadhiya Addis Ababa iyo London oo dhegaysanaya kulanka Madaxweyne Riyaale iyo Wasiir Chris Mullin
Wuxuuna Madaxweynuhu gudoonsiiyay Wasiirka Astaan Sawiran oo koobaysa xidhiidhka Somaliland iyo Boqortooyada dalkiisa ka dhaxaynjirtay, maunaasabadii madaxbanaani ogolaanshaha Somaliland iyo guud ahaan arimaha muujinaya Somaliland inay ahayd wadan gaara oo jira isu tagii xamar ka hor, sii aanloogu khaldamin wadankani inuu ahaa gobol ka mida Somalia.
Ka bilaw Bidix Wasiirka Madaxtooyada Somaliland iyo Wasiirka Maaliyadda Somaliland oo ka qayb qaadanaya Kulanka Madaxtooyada.
Wasiirka oo aad uga mahad celiyay hadyada, soo dhawayntii iyo saraaxada loogu muujiyay rabitaanka shacbiga wuxuu balan qaaday xaqiiqada halkan uu kala kulmay inuu xukuumadiisa gaadhsiin doon.
Ka bilaw Bidix Xoogyaha koobaad ee safaaradda ingiriiska Jibouti, Wasiirka xidhiidhka golayaasha Somaliland, iyo Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo ka qayb qaadanaya kulanka Madaxtooyada.
Kulankaa sagootiska ah waxa Madaxweynaha kala qayb galay ku xigeenkiisa Axmed Yuusuf Yaasin iyo Wasiirada Arimaha Dibada, Warfaafinta, iyo Madaxtoyada.
Madaxweyne Daahir Riyaale, Wasiirka Arrimaha dibadda Somaliland Marwo Adna iyo Wasiirka u qaabilsan Britain Africa oo si gaar ah ugu wada hadlaya xafiiska shaqada ee Madaxweynaha Somaliland, Madaxtooyada.
Madaxweyne Riyaale oo sii sagootinaya Wasiirka u qaabilsan Britain Africa Chris Mullin wada hadalkoodii ka dib.
(Wakhtiga la qaaday sawiradu waa bacda salaadda makhrib saacadda magaalada hargeysa)
Warbixintani Waxaa soo diyaariyey Weriyaha Halganews u jooga Magaalada Hargeysa Cabdifatax waxaana soo tabinaya Mohamed abdi Hassan (diridhaba)